#Mas’uuliyiin Ka Tirsan Dawlada Oo Lagu Eedeysay Inay Taageraan Xubno Al-shabaab ah
By WARIYAHA MUQDISHO On Aug 21, 2019
Guddoomiyaha maxkamada Sare ee ciidamada Qalabka Sida Liibaan Cali Yaroow ayaa eedeyn culus u jeediyay mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda oo sida uu hadalka u dhigay guryahooda ku haya xubno ka tirsan Al-shabaab.
Guddoomiye Yaroow ayaa sheegay in waayadii ugu danbeeyay deegaannada Koonfur Galbeed ku badnaayeen xubnaha ka tirsan Al-shabaab ee isku soo dhiiba saraakiisha dowladda, kuwaa oo intooda badan la mariyay nidaamkii saxda ee diiwan-galinta.
Laakiin wuxuu sheegy in taa badalkeeda ay jiraan tiro kale oo badan oo ka soo goostay Al-shabaab oo si toos ah u taga guryaha saraakiisha iyo xildhibaannada ay isku beesha yihiin ee ka tirsan dowladda oo aan loo soo gudbin laamaha Amniga.
“Ama xildhibaan ha ahaado, ama sarkaal ciidan ha ahaado, ama dowladda haka tirsanaado cid laga aqbalayo ma jirto in xubin ka tirsan Al-shabaab oo baxsad ah in ay gurigeeda ku heysato, ciddii arintaa lagu helo Maxkamadu waxey u aqoonsan doontaa in ay ka tirsan yihiin Al-shabaab” ayuu yiri Liibaan Cali Yaroow.
Waa markii ugu horeysay oo maxkamada ciidamadu si toos ah ugu eedeyso mas’uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha cidamada dowladda in ay gacan ku siiyaan xubnaha ka soo goosta Al-shabaab in ay si xor ah isaga joogaan deegaannada ay dowladdu maamusho iyada oo lagu soo war-galin laamaha Amniga.